BREAKING: मंगल ग्रहका लागि हरेक दिन ३ उडान, पृथ्वीबाट १० लाख मानिस लगिने – AB Sansar
BREAKING: मंगल ग्रहका लागि हरेक दिन ३ उडान, पृथ्वीबाट १० लाख मानिस लगिने
विश्व प्रवास सूचना प्रविधि
October 28, 2020 adminLeaveaComment on BREAKING: मंगल ग्रहका लागि हरेक दिन ३ उडान, पृथ्वीबाट १० लाख मानिस लगिने
मंगल ग्रहका लागि हरेक दिन ३ उडान, पृथ्वीबाट १० लाख मानिस लगिने !
काठमाडौं। मंगल ग्रहमा जानको लागि हरेक दिन ३ उडान संचालन हुनेछन् । हरेक उडानमा १०० जना मानिसले मंगल ग्रह जान पाउनेछन् । १ वर्षमा १ हजार उडान हुनेछन् र २०५० सम्म मंगल ग्रहमा १० लाख मानिस पुग्नेछन् । मंगल ग्रहमा बस्ती बसाउने महत्वाकांक्षी योजनामा काम गरिरहेको कम्पनी स्पेसएक्सले यस्तो योजना सार्वजनिक गरेको हो । अर्बपति एलन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्सले झण्डै २ दशकदेखि मंगल ग्रहमा मानिस लैजाने परियोजनामा काम गरिरहेको छ । **** यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
पछिल्लो जानकारी कम्पनीकी सीओओ गिन्नी शटवेलले टाइम म्यागजिनसँगको कुराकानीका क्रममा बताएकी हुन् । शटवेलका अनुसार कम्पनीले मंगल ग्रहमा इन्टरनेटको सुविधाको लागि काम गरिरहेको छ र यसको लागि अहिले स्टारलिंकका स्याटेलाइटहरुलाई अन्तरिक्षमा स्थापित गरिँदैछ । शटवेलका अनुसार स्टारलिंकका स्याटेलाइटहरुले पृथ्वी र मंगल ग्रह दुवैतर्फ इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनेछन् । यी स्याटेलाइटले दुई ग्रहमा रहेका मानिसहरुलाई जोड्ने काम गर्नेछन् । **** यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
यसअघि २०१७ मा एलन मस्कले आफूले २०२२ सम्ममा मंगल ग्रहमा २ कार्गो विमान पठाउन चाहेको बताएका थिए । उनले २०२४ सम्म अन्य ४ विमान पठाउन चाहेको समेत बताएका थिए । यी चार फ्लाइटमा २ जना मानिस पनि जाने उनको योजना थियो । स्पेसएक्सले स्टारशिप रकेटमार्फत मानिसलाई मंगल ग्रहमा पठाउन चाहन्छ । अघिल्लो महिना एलन मस्कले रकेट बनाउने काम भइरहेको बताएका थिए । उनले मंगल ग्रहमा बस्ती बसाउनु निकै कठिन हुने र यस क्रममा कैयौं खतरा पनि हुने स्वीकार गरेका थिए । DC NEPAL बाट **** यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
सुनको मूल्य ओरालो लाग्ने क्रम जारी, आज एकै दिन यति धेरै रुपैयाँले घट्यो !
यही एउटा फोटोको कारण श्रीमानले श्रीमती संग मागे छोडपत्र
August 4, 2021 Ab-संसार
मलाई हिन्दु धर्म मान्न कसैले कर गरेको होइन;आमाबाट पाएको संस्कार र संस्कृति मानिरहेको छु’ – नाजिर
एक महिलाले ७ महिनामै एकैपटकमा जन्माइन् १० सन्तान, राखिन बिश्व रेकर्ड (तस्विर सहित)
June 9, 2021 June 9, 2021 Ab-संसार
छोराको सर्टिफिकेट लिन स्कुल गएका ४८ वर्षिया देबबहादुरको अरिंगालले टो’केर मृत्यु September 25, 2021
सुख्खा नरिवल खाँदा महिलालाई यति धेरै फाइदा September 25, 2021
महरा मृ, त फेलापरेपछि…..ह,त्याको आरोपमा ७ जना नियन्त्रणमा September 25, 2021